नेपाली पब्लिक २०७६, १२ चैत बुधबार १०:२४
एजेन्सी– चम्किला सडक, बहुतले भवन र यहाँको वैभवले विश्वलाई सहर कस्तो हुन्छ र कस्तो देखिन्छ भन्ने शिक्षा दिन्छ। भनिन्छ, यो सहरको तीव्रता कहिल्यै कम हुँदैन। २४ घण्टा, सातै दिन घण्टाघरमा राखिएको घडी अनवरत रुपमा चलिरहन्छ। तर कोरोना भाइरसले यो शहरको तीव्रतालाई रोकिदिएको छ। सडक सुनसान छन।, गल्ली खाली छन् भने मानिसहरु घरभित्र कैद छन्।
न्यूयोर्क अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सहर हो। तर यो सहरमा बस्ने मानिस आफ्नै लागि खतरा बनिरहेका छन्। स्टेनफर्ड युनिभर्सिटीम महामारीको अध्ययन गराउने डाक्टर स्टीभन गुडम्यानका अनुसार यस्तो अवस्थामा धेरै जनसंख्याले दुश्मनको रुप लिन्छ।
अमेरिकाको पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित लेखमा डा. गुडम्यान भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा धेरै जनसंख्या खतरा सावित हुन्छ। धेरै जनसंख्या भएको क्षेत्र जहाँ धेरै मानिस एकै समयमा एक अर्कासँग भेटघाट गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तोमा भाइरस तीव्र रुपमा फैलिन्छ।’ न्यूयोर्कको मेट्रो रेल जसलाई सबवे भनिन्छ, त्यसमा दैनिक पचास लाखले यात्रा गर्छन्।
जबकि दिल्लीमा मेट्रोमा तीन दिनमा पनि पचास लाखले यात्रा गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा न्यूयोर्क कोरोना भाइरसको केन्द्र किन बनिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
न्यूर्योकमा बस्नेको अवस्था कस्तो छ?
इप्सिता यतिबेला आफ्ना केही सहयोगी र साथीसँग युनिभर्सिटीमा नै बसेकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘जब हामीकोठाबाट बाहिर निस्किन्छौं तब हाम्रो हातमा ग्लब्स र मुखमा मास्क हुन्छ। हिँड्दा पनि मानिसहरु एक र दुई मिटरको दूरी बनाएर हिँड्छन्। गल्तीले कोही मानिस नजिक आए भने मानिसहरु डराउँछन्।’
न्यूयोर्कमा तमाम यस्ता एजुकेशन इन्स्टिच्यूटशंस छन् जहाँ इप्सिता जस्ता लाखौं विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष पुग्छन्। इप्सिताका अनुसार केही संस्थानले आफ्नो डोरमेटरिजमा बच्चा राख्न अस्वीकार गरेका छन्।
योसँगै कोरोना भाइरसका कारण ती विद्यार्थीको जीवनमा निकै ठूलो असर परेको छ, जो आफ्नो डिग्री पूरा गरेर जागिर खाने कोशिशमा थिए। बीबीसी
प्रकाशित मिति: २०७६, १२ चैत बुधबार १०:२४